मलाई देखेर थुक नि’ल्छन भने मेरो के दोष ? -
Home जीवनशैली मलाई देखेर थुक नि’ल्छन भने मेरो के दोष ?
मलाई देखेर थुक नि’ल्छन भने मेरो के दोष ?
निर्माता निर्देशकको आँखामा परिन् उनी। त्यहीँ एउटा फिल्ममा उनले एक सिनमा अभिनय गर्ने मौका पाइन्। निर्माता मौनता श्रेष्ठले बोस नामक फिल्म बनाउँदै थिए।” यो पनि पढ्नुहोस – पहिलो भेटमा पुरुषहरू बढी ख्याल दिन्छन् महिलाका यी अं’गहरूमा
आँखा वास्तवमा आँखा पहिलो नजर पर्ने अंग नै हो । आँखाको आकार, नशालु पन, नानीको रङ, परेलाको बनावट लगायतका सबै कुराले महिलाको आ’कर्षणमा प्रभाव पार्छ र यो कुरामा पुरुषले विशेष ध्यान दिन्छन् । हाम्रा अन्य समाचार पनि पढ्नुहोस्…..